I-United Airlines: Ukufumana i-MileagePlus yeNkulumbuso yenqanaba le-2022 yenziwe yalula
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-United Airlines: Ukufumana i-MileagePlus yeNkulumbuso yenqanaba le-2022 yenziwe yalula
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • iindaba • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
United Airlines namhlanje ibhengeze utshintsho kwinkqubo yayo yeNkulumbuso yeMileagePlus eya kwenza ukuba kube lula ukufumana iwonga ngo-2021 kunyaka wama-2022. I-United iyanciphisa amanqaku ePremier Qualifying Points (PQP) kunye nePremier Qualifying Flights (PQF) thresress kunyaka olandelayo kwaye yazisa ngohlobo lwayo lokunyusa olunceda amalungu ukuba afumane inqanaba ngokukhawuleza. Ebutsheni bonyaka ozayo, i-United izakufaka i-25% yeemfuno ze-PQP kuphela kwiiakhawunti zamalungu eNkulumbuso ngokusekwe kwinqanaba labo leNkulumbuso ngo-2021. I-United iya kuthi inike amalungu ibhonasi ye-PQP kuhambo lwabo lokuqala oluya kwi-2021 ukuya nge-31 kaMatshi, bencedisa iinqwelomoya zabo ukuba ziye kufikelela kwinqanaba.
"Kuwo wonke lo nyaka, i-United ithathe indlela yobunkokheli ekwenzeni utshintsho olulungele abathengi, kwaye isibhengezo sanamhlanje sokwenza kube lula ukufikelela kwinqanaba lelinye inyathelo esilithathayo ukwenza i-United ibe yinkampani yeenqwelo moya engcono kubathengi bethu," utshilo uLuc Bondar , usekela-mongameli wokunyaniseka kunye nentengiso kunye noMongameli weMileagePlus eUnited. “Ukusukela ekumemezeleni imigaqo-nkqubo yobugcisa bokucoca kunye nezokhuseleko, ukuya kubuchwepheshe obutsha bokuyila kwaye ngoku sihlengahlengisa inkqubo yethu yokunyaniseka ukubonisa le ndawo intsha, abathengi be-United banokuziva benentembelo yokuba senza utshintsho oluqhubela phambili olubonisa iimfuno zabo kunyaka olandelayo nakwiminyaka ezayo. ”
Ukwenza ubume bemivuzo bube lula, i-United iyanciphisa iimfuno ze-PQP kunye ne-PQF kwinqanaba leNkulumbuso nganye. Iimfuno ezintsha ngo-2021 ziya kuba:
Nqanaba Iimfuno eziqhelekileyo Iimfuneko ezihlengahlengisiweyo ze-2021
INkulumbuso yeSilivere I-4,000 PQP + 12 PQF or I-PQP engama-5,000 I-3,000 PQP + 8 PQF or I-PQP engama-3,500
Inkulumbuso yeGolide I-8,000 PQP + 24 PQF or I-PQP engama-10,000 I-6,000 PQP + 16 PQF or I-PQP engama-7,000
INkulumbuso yePlatinam I-12,000 PQP + 36 PQF or I-PQP engama-15,000 I-9,000 PQP + 24 PQF or I-PQP engama-10,000
INkulumbuso 1K I-18,000 PQP + 54 PQF or I-PQP engama-24,000 I-13,500 PQP + 36 PQF or I-PQP engama-15,000
Ukubeka ngokuzenzekelayo iPQP
Ukwenza imeko ihlale ilula ngakumbi kumalungu eNkulumbuso, i-United izakufaka i-PQP ngokuzenzekelayo kwiiakhawunti zazo ngoFebruwari 1, 2021. Amalungu azakufumana iipesenti ezingama-25 zeemfuno ze-PQP kuphela ngo-2021 ngokusekwe kwiNkulumbuso yabo ngo-2021. Inqanaba ngalinye liya kufumana ezi zilandelayo zidipozithi ze-PQP ukunceda ukuba bazibeke emgceni wokuphinda bakulungele ukubekwa kwinqanaba ngo-2022:
Inqanaba lesimo se-2021 Idiphozithi yePQP
INkulumbuso yeSilivere 875
Inkulumbuso yeGolide 1,750
INkulumbuso yePlatinam 2,500
INkulumbuso 1K 3,750
I-United ikwabonelela ngeyona bhaso inkulu yeNkulumbuso yokufumana ibhonasi ye-PQP. Kuhambo lokuqala lokurhola i-PQP kunyaka ozayo othathwe phakathi kuka-Jan. 1 ukuya kuMatshi 31, amalungu angenanqanaba leNkulumbuso aya kufumana i-50 yepesenti yebhonasi ye-PQP kunye namalungu eNkulumbuso aya kufumana i-100 yepesenti yebhonasi yePQP.
Ukongeza ekufumaneni ibhonasi ye-PQP kwiinqwelomoya, i-PQP ifunyenwe kumakhadi etyala eMileagePlus afanelekileyo- kubandakanya nekhadi le-MileagePlus Explorer-ngoku liza kubala kwiNkulumbuso 1K® iwonga ukuba iimfuno zePQF zifezekisiwe. Ngaphambili, i-PQP efunyenwe kwinkcitho yamakhadi ibifanele kuphela ukuya kwinqanaba leNkulumbuso yePlatinam. Amakhadi ekhredithi eMileagePlus afanelekileyo aqhubeka nokukhokelela kwintengiso yenye yeendlela ezikhawulezayo zokufumana ikhredithi yenqanaba lePremier, ukuqala ngokuchitha kwi- $ 12,000 ngonyaka.
Ithuba elingakumbi laMalungu angakumbi
Ukunika amalungu eNkulumbuso ubhetyebhetye ekusebenziseni ukuphuculwa kwawo, i-United yandisa zonke ii-PlusPoints ezimiselwe ukuba ziphelelwe ngomhla okanye emva kukaJan. 1, 2021 ngeenyanga ezintandathu ezongezelelweyo, ezibandakanya zonke ii-PlusPoints ezifunyenwe ukusukela ngo-2019 nangowe-2020 ngomsebenzi. Ukongeza, njengonyuselo kwi-2021, i-United inika amalungu eNkulumbuso 1K ahlangabezana neemfuno ezintsha amathuba amaninzi okufumana uhlaziyo olongezelelekileyo ngokunciphisa inqanaba lokufumana i-PlusPoints eyongezelelweyo. Emva kokufumana inqanaba leNkulumbuso ye-1K kunye ne-15,000 PQP, amalungu azakufumana ama-20 PlusPoints kuyo yonke i-2,000 PQP eyongezelelweyo ngo-2021 xa ithelekiswa ne-3,000 PQP ngo-2020 - uManyano kuphela kweenqwelo moya ze-US ezivumela amalungu ukuba afumane uhlaziyo olungenamda emva kokufikelela kwinqanaba eliphezulu elipapashiweyo.
Ngo-2021, onke amalungu eNkulumbuso aya kuba nakho ukuqinisekisa ukungatshintshwa kohambo lwabo xa besenza utshintsho kuhambo kwangolo suku lunye xa kuvulwa inqwelomoya entsha eneklasi enye yokuhamba. I-United kuphela kweenqwelo moya e-US ukubonelela ngesi sibonelelo kuwo onke amalungu eNkulumbuso, ukongeza ekuvumela bonke abathengi ukuba babhale uluhlu lokuma kwi-moya eyahlukileyo kwindawo enye ngosuku olunye simahla.
Amaqabane eFinnair noJuneyao Air eHelsinki-Shanghai ...
Uqhushumbo lwamatye aliqela kumbindi weMoscow, ukwenzakala ...
Umzi wozakuzo wase-Eswatini ulumkisa: Hlala ekhaya!
Isibhengezo sasePort Moresby malunga noKhuseleko lwezoLimo loMmandla ...